नेपालमा फेसबुक दर्ता हुने कि नहुने ? कर किन नतिर्ने ? « Postpati – News For All
नेपालमा फेसबुक दर्ता हुने कि नहुने ? कर किन नतिर्ने ?
गाेपाल साउद/फाल्गुन २०, काठमान्डौ । सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् । तर, त्यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विपक्षी दल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आशंका गरेका छन् ।
-फेसबुक, गुगलसहित अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि कम्पनीले भारत, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म भ्याट र आयकर तथा अमेरिकामा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउँदै आएका छन् । तर, नेपालमा भने नियमनबाहिर रहँदै आएका छन् । फेसबुकले भारतको कार्यालयबाट भारतकै लागि विज्ञापन खरिद गर्दा थप १८ प्रतिशत जिएसटी जोड्ने गरेको छ । एउटा देशबाट अर्को देशका लागि विज्ञापन गर्दा विज्ञापनकर्ताले भ्याट तिर्नुपर्ने फेसबुकले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । फेसबुकमा विज्ञापनका लागि स्वीकार गरिने भुक्तानीको विकल्प सूचीमा नेपालसहित ८५ देश रहेका छन् । फेसबुक बिजनेसका अनुसार नेपालबाट मास्टर कार्ड, भिसा, अमेरिकन एक्सप्रेसलगायतका क्रेडिट कार्ड तथा ब्रान्डेड डेबिट कार्ड र पेपालका माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरी फेसबुक विज्ञापन गर्न सकिन्छ ।